Voahidy tamin'ny iCloud ny iPhone, azo vohana ve izy io? | Vaovao IPhone
Izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny hidy iCloud ho an'ny iPhone
Miguel Hernandez | | Vaovao IPhone, iCloud, Fampianarana sy torolàlana
Indraindray dia mipoitra ny fisalasalana mandrakizay, vitantsika ve mamaha ny iCloud? Ity fepetra fiarovana apetraky ny Apple amin'ny iOS fitaovana rehetra hatramin'ny nahatongavan'ny iOS 7 ary nihatsara be tamin'ny iOS 8, dia mety hiteraka olana maro amintsika raha tsy fantatsika ny asany. Amin'ny ankapobeny, dia ny fanampiana antsika tsy ho very ny fitaovantsika, na farafaharatsiny mba tsy ho azo aleha mihitsy raha sanatria ka noraisin'izy ireo tsy ara-dalàna izany, na izany aza, ny fampiasana tsy ara-dalàna izany dia mety hiteraka tsy fankasitrahana hafa ihany koa. T
e izahay hampianatra ny zavatra rehetra ilainao ho fantatra momba ny hidin-trano iCloud ho an'ny iPhone, inona izany, ny fomba fisorohana azy sy ny fampiasana azy, ary ambonin'izany rehetra izany. ny fomba fanesorana ity hidin-kazo ity amin'ny alàlan'ny iCloud amin'ny iPhone. Zava-dehibe koa izany zahao fa tsy voahidy iCloud ny fitaovana iray alohan'ny hividiananao azy amin'ny tanana faharoa, koa aza hadino ity lahatsoratra mahaliana ity.
Hitan'izy ireo fomba iray hamafana kaonty iCloud tsy misy teny miafina
Hamaly amin'ity lahatsoratra mahafinaritra ity isika amin'ireo fanontaniana rehetra mety hipoitra sy bebe kokoa, ary tsy hoe hanomana lisitra iray manan-danja fotsiny isika amin'ny zava-drehetra manodidina ny fanakanana ny iCloud an'ny iPhone, fa afaka mandray anjara mavitrika ihany koa ianao amin'ny fanehoan-kevitra, toy ny mahazatra, ho eo izahay hihaona amin'ny filan'ny mpamaky ao amin'ny Actualidad iPhone, miaraka amin'i ity boky torolàlana ho an'ny mpampiasa iCloud malalaka ity sy tsotra indrindra ho anao hamaha ny fisalasalanao momba ny fomba hamohana iCloud.
Zava-dehibe tokoa ny fahafantarantsika tsara ireo fepetra sy fitaovana apetrak'i Apple eo am-pelatanantsika ireo, raha haintsika ny mampiasa tsara ireo fampiasa rehetra ireo, dia hivadika tontolo iainana iOS ho tontolo iainana azo antoka kokoa isika, omena andiana fepetra izay dia hamela antsika hiara-hiaina amin'ireo teknolojia vaovao amin'ny fomba mora kokoa, hamonjy antsika ireo tahotra.
Ary ambonin'izany rehetra izany, satria ny olona iray dia mora iharan'ny fangalarana ny fitaovany, na very azy io amin'ny fisavoritahana fotsiny, noho izany dia tsy maintsy araraotintsika izay rehetra apetrak'i Apple ho azontsika. Vao tsy ela akory izay no nahalalantsika fa ny halatra fitaovan'ny fitaovana iOS dia nilatsaka be tany Etazonia hatramin'ny nanatanterahan'i Apple ity fepetra fiarovana ity.
1 IPhone voahidy amin'ny iCloud?
2 Ahoana no ahitako sy mihidy ny fitaovako amin'ny iCloud
3 Ahoana no hialana amin'ny fividianana iPhone mihidy amin'ny iCloud
4 Ahoana no hahalalana raha voahidy amin'ny iCloud ny iPhone
5 Ahoana ny fampandehanana ny iCloud hidin-trano ho an'ny iPhone
6 Azo esorina amin'ny alàlan'ny jailbreak ve ny hidin-trano iCloud?
IPhone voahidy amin'ny iCloud?
Na dia iCloud aza ny sehatra, satria ny zava-drehetra dia mamakivaky ny rahona, ny rafitra "Find My iPhone Activation Lock" no tena niantsoana azy. Raha vantany vao very ny masontsika amin'ny fitaovana iOS dia afaka manararaotra ny "activation lock" isika Karohy ny iPhone-ko mba hisorohana ny olon-kafa tsy hampiasa ny fitaovana iOS, anisan'izany ny iPhone, na very izany na nangalarina. Na dia tsy mora idirana aza ny fitaovana iOS satria saika ahitana ny teknolojia TouchID dia tsy ratsy ny mahita sy manakana ny fitaovantsika raha toa ka misy fampahalalana manokana na saro-pady, ny fiarovana dia iray amin'ireo laharam-pahamehan'ny Apple hatrany.
Io hidin-trano io dia mandeha ho azy amin'ny fitaovana iOS rehetra avy amin'ny iOS 7, ary tsy mamela antsika hanakana lavitra ny fitaovana fotsiny, ankoatry ny fitadiavana azy, fa hanakana ny fidirana sy ny famafana ny angon-drakitra izay ananan'ny iOS fitaovana na ny iPhone resahina, satria raha te hiditra azy io, na avereno izany, mila tsy azo ovaina ny masontsivana fidirana. Ka raha te hamerina amin'ny laoniny ny fitaovana iray isika dia tsy maintsy manana ilay fiasa Karohy ny iPhone-ko tapaka, ary noho izany dia tsy maintsy fantatsika ny Apple ID mifandraika amin'ilay fitaovana. Toy izany koa, raha te hanomboka fitaovana iray mifandraika amin'ny Apple ID aorian'ny famerenana amin'ny laoniny isika dia tsy maintsy mampiditra ny teny miafin'ny Apple ID izay ampifandraisina amin'ilay fitaovana.
Ity fiasa ity dia manampy amin'ny fiarovana ny fitaovana, indrindra rehefa nangalarina izy io, mampitombo ny vintana ahazoana azy io. Tsaroanay fa na dia efa niova endrika aza ny fitaovana dia ampifandraisina amin'ny Apple ID izy ioNoho izany, ho azo zahana izany, ary tsy misy olona afaka mamerina mamorona io fitaovana io raha tsy misy ny fanekenao. Ity teknolojia ity dia tsy voafetra amin'ny iPhone, iPad ary iPod Touch ihany, fa ny Apple Watch koa manana ny hidiny fampandehanana azy manokana.
Raha tianao izany fantaro raha iPhone mihidy amin'ny iCloudAmin'ny famenoana ity endrika manaraka ity dia hahazo ny pitsopitsony rehetra amin'ny mailakao ianao, zavatra iray tena ilaina mba hisorohana ny fividianana finday nangalatra na very ny tompony ary nametraka ny hidin-trano iCloud.
Ity no ahafahanao manamarina raha voahidy amin'ny iCloud ny iPhone
Ahoana no ahitako sy mihidy ny fitaovako amin'ny iCloud
Ilay teny mihitsy no milaza azy hoe, iCloud no lakileny, ary raha hanakanana azy dia tsy mila fifandraisana Internet fotsiny isika, Apple dia manome fitaovana tena ilaina, ny rahona. Tsy maintsy miditra amin'ny tranokala iCloud isika, raha mbola manana Tadiavo ny findaiko navotsotra mazava ho azy, ary avy any, afaka miditra amin'ny fomba hafa rehetra azo atao amin'ity rafitra fiarovana ity isika. Ny tranonkala dia tsy mety ho hafa amin'ny "www.icloud.com", izay tsy ahitantsika ny suite an'ny biraon'ny Apple iray manontolo (Pejy, Isa ary Keynote), ankoatry ny mailaka sy ny fampifanarahana sary azy ho azy, ankoatry ny asa maro hafa, fa manana koa isika Search, fitaovana iray izay manana ny kisary mitovy aminy Karohy ny iPhone-ko, Ka tsy ho very ianao.
Raha hiditra amin'ny iCloud indray, dia mila ny mailaka sy teny miafina mifandraika amin'ny Apple ID isika, izany hoe ny kaonty Apple izay nampifandraisinay tamim-pahatokiana tamin'ny iPhone. Raha vantany vao tsindrio ny kisary, dia hangataka ny kaonty indray ny rafitra, hanamarina fa tomponay ara-dalàna amin'ny fitaovana hotadiavina izahay. Rehefa miditra ny teny miafintsika isika, dia maharitra segondra vitsy ny rafitra hahitana amin'ny alàlan'ny Apple Maps, ny toerana tena misy ilay fitaovana.
Ao no ahitantsika ny fitaovanay rehetra voatanisa, farafaharatsiny ireo rehetra mifandray amin'ny Apple ID, fa raha mpitantana vondrona iray izahay Ao amin'ny fianakaviana iCloud, azontsika atao ihany koa ny mamantatra ny sisa amin'ireo fitaovana Apple izay ao anatin'io vondrona io. Rehefa misafidy fitaovana manokana iray isika dia afaka miditra eo amin'ny toerany eo no ho eo, hanondro koa ny batterie misy an'ilay fitaovana, ary hahafahantsika manao safidy telo:
Mamoaka feo: Mba hahitana ny iPhone raha very an-trano izany
fanombohana ny maody very: Mangataka nomerao telefaona amintsika izay haseho ho azy eo amin'ny efijery iPhone izy io, ka izay mahita azy dia afaka mahita sy mamerina izany amintsika, raha tadiavin'izy ireo.
hamafa iPhone: Raha matahotra isika ary manana fampahalalana saro-pady ny fitaovantsika dia hamafana lavitra ny fitaovana.
Ahoana no hialana amin'ny fividianana iPhone mihidy amin'ny iCloud
Rehefa mividy fitaovana iPhone an-tanana isika dia mipoitra haingana io fanontaniana io «Ahoana no hialako amin'ny fivarotana fitaovana halatra, na fanidiana ny iCloud?«Noho izany, tsy maintsy ataontsika antoka fa voafafa teo aloha ity fitaovana izay ho azontsika ity ary tsy mifandray amin'ny kaonty Apple ID teo aloha izy io. Mety hitranga izany noho ny antony roa, ny fangalarana ny iPhone, na ny tompon'ny iPhone, izay izy indray no mpivarotra, dia tsy mahalala ny tombotsoan'ny hidin-trano iCloud ary tsy nampifandray ilay fitaovana teo aloha.
Ary farany, apetrak'i Apple amin'ity bateria ity ny batterie, ary mba hialana amin'izany dia afaka fitaovana web izay hahafahantsika hahafantatra amin'ny fomba mora indrindra raha toa ka voasakana ny fitaovana iray na tsia, na farafaharatsiny raha manana ny hidin'ny activation ianao. Ny zavatra ratsy dia nanjavona ity fitaovana ity ary ankehitriny dia mila mampiasa fomba hafa ianao toa ilay arosonay etsy ambany ary hahafahanao mahalala raha mila mamoha iCloud amin'ny iPhone manokana ianao:
Fitaovana fanaraha-maso hidin-trano amin'ny alàlan'ny iCloud.
Zava-dehibe ny fahalalana ny satan'ny iPhone faharoa izay hidirantsika. Ny iPhone, noho ny vidiny lafo, dia vokatra iray izay mampindrana ny tenany amin'ny tsena faharoa, izy io koa dia vokatra izay mihena kely raha oharintsika amin'ny fifaninanana, ka feno ny fitaovana iPhone ny tsena. , izany no antony, Tsy maintsy matahotra automatique izay iPhone hitantsika amidy faharoa isika, nefa ny vidiny somary ambany noho ny hitantsika ao amin'ireo doka sisa. Ny fahazoana fitaovana iPhone izay mifamatotra amin'ny kaonty Apple ID iray hafa dia fandaniam-bola, satria raha mavitrika izy io, dia tsy ho afaka hividy fampiharana vaovao akory isika, ary raha hamerina azy io dia tsy ho afaka hanomboka velively isika. izany. Ho fanampin'ny zava-misy Hita tanteraka ny iPhone, ka afaka mihinana volontany lehibe iray ara-dalàna isika Raha mihazona ilay iPhone an'ny olon-kafa isika dia izany no antony tsy maintsy mandeha amin'ny masony an'arivony rehefa mividy iPhone faharoa.
Ahoana no hahalalana raha voahidy amin'ny iCloud ny iPhone
Na izany aza, tsy afaka tonga eto foana isika, na tsy manam-potoana. Raha eo afovoan'ny fifanakalozana isika dia afaka manamarina mora foana raha ampifandraisina amin'ny Apple ID ilay fitaovana na tsia, ary noho izany, tsy misy ilana azy ho antsika manokana. Noho izany, asehonay anao ny fomba roa hijerena raha misy iPhone manana Activation Lock na iCloud hidina raha toa ka tsy afaka mampiasa ny fomba fanamarinana Apple izay nasehonay teo aloha izahay:
Fomba 1: Vonoinay ny iPhone ary averinay indray izy io, raha miseho eo amin'ny efijery an-trano ny efijery ary mangataka kaody isika, dia satria tsy voafafa sy nesorina tamin'ny iPhone ID nifanaraka ilay iPhone.
Fomba 2: Raha mahita iPhone naverina amin'ny laoniny isika, ary noho izany dia eo am-pandaminana azy io, tsy maintsy mandroso ao anatiny isika, mandra-pahatapitry ny fotoana hanontaniany amintsika ny tenimiafin'ny Apple ID izay ampifandraisina, raha izany, ny iPhone dia mifamatotra amin'ny ID Apple ihany koa, ka noho izany dia tsy antsika izy io.
Noho izany, amin'ny fanarahana ireo fomba tsotra roa ireo dia afaka misoroka tsy ny scam fotsiny isika, fa koa manelanelana amin'ny fomba fifampiraharahana amin'ny fitaovana halatra, zavatra izay tsy ara-dalàna tanteraka. Ny fisorohana dia tsara kokoa noho ny fanasitranana, ary raha miresaka momba ny hidin-trano iCloud iCloud dia tsy mankarary izany.
Ahoana ny fampandehanana ny iCloud hidin-trano ho an'ny iPhone
Io fepetra fiarovana io dia mifameno, izany hoe isika no manapa-kevitra raha hampihetsika azy na tsia. Noho izany rehetra izany, Apple dia manome torolàlana tsara ho antsika, mba hahafahantsika mamono azy io isaky ny maniry isika.
Raha nampifangaroinao tamin'ny Apple iPhone ny iPhone Watch dia esory ny Apple Watch.
Manaova iray nomaniny ho solon'izay avy amin'ny fitaovana iOS.
Kitiho ny toe-javatra> iCloud. Mikorisa ambany ary tap Mivoaha. Ao amin'ny iOS 7 na taloha, kitiho ny kaonty.
Kitiho ny Mivoaha indray, ary avy eo paompy Esory amin'ny iPhone ary ampidiro ny teny miafina.
Miverena any amin'ny Settings ary kitiho ny General> indray > Fafao ny atiny sy ny fikiranao. Raha nanokatra ny Find My iPhone ianao dia mety mila miditra ny Apple ID sy ny teny miafinao.
Raha angatahina aminao ny kaody fitaovana na ny kaody Fepetra, dia ampidiro. Avy eo paompy hamafana [fitaovana].
Mifandraisa amin'ny mpandraharaha anao hanampy anao hamindra ny serivisy amin'ny tompona vaovao. Raha tsy ampiasainao karatra SIM misy ilay fitaovanaAzonao atao ihany koa ny mifandray aminy mba hahazo fanampiana amin'ny famindrana ny serivisy amin'ny tompona vaovao.
Azo esorina amin'ny alàlan'ny jailbreak ve ny hidin-trano iCloud?
Tsia ny valiny mazava ho azyTsy te hahalala na hizara izany vaovao izany izahay. Raha mila zavatra ilaina ianao mamaha ny iCloud Ho an'ny fitaovana izay anao ara-dalàna, Apple dia manana serivisy an-tariby izay hiandraikitra ny fanomezana anao vahaolana haingana aorian'ny fanamarinana ny mombamomba anao sy ny fanananao. Ho fanampin'izay, ampahatsiahivinay ianao fa maro ny horonan-tsary sy fampianarana hanaovanao izany izay hitanao amin'ny Internet fa fisolokiana tsotra, ary mety handany fotoana sy vola fotsiny ianao amin'ny farany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fampianarana sy torolàlana » Izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny hidy iCloud ho an'ny iPhone
31 hevitra, avelao ny anao
asd dia hoy izy:
Mamaly an'i Assd
Miguel Hernandez dia hoy izy:
Valiny tamin'i Miguel Hernández
Valiny tamin'i Fede
Fampahalalana kely momba azy…, satria hitanao ilay boky torolalana ary dia izay.
Valiny tamin'i PAOLY
Manuel dia hoy izy:
Raha manao ny fangatahana aho dia asehoy ahy fa tapaka ny lakilen'ny fampidirana iphone, inona no tokony hataoko mba hampihetsika azy?
Valiny tamin'i Manuel
Emanuel dia hoy izy:
Azafady mba ampio aho fa ny iPhone-ko mihidy amin'ny icloud ary tsy afaka mamoha ahoana no mety ho aho?
Valiny tamin'i Emanuel
pallares dia hoy izy:
tena mahaliana ny fanazavanao
Mamaly an'i pallares
sgsgf dia hoy izy:
Mamaly an'i sgsgf
vero dia hoy izy:
Manana iphone 4s tanana faharoa aho ary voasakana ny icloud! Raha mamoha azy aho dia avela hampiasa azy io ho ipod?
Mamaly an'i vero
ROMELA CARDENAS dia hoy izy:
TSARA, AZO ATAO VONDRONINA VE NY IPHONE IHANY AMIN'NY ICLOUD RAHA MBA HITAN'NY FAMPIANARANA TSY MAFOTRA NY IPHONE KO?
Valio amin'i ROMEL CARDENAS
Ignatius Room dia hoy izy:
tsia, tsy afaka atao izany raha tsy mihetsika io fiasa io.
Valiny ho an'i Ignacio Sala
Yoendy Munoz Bravo dia hoy izy:
Manana iPhone 6s hita aho, inona no ataoko?
Valiny tamin'i Yoendy Munoz Bravo
Salama, nividy iphone 2 aho tany Irlandy avaratra ho an'ny zanako vavy. Ny iray tsy nanana olana, fa ny iray hafa, rehefa mandrafitra azy dia tsy mamela ahy hametraka ny rafitra fandidiana, nilaza tamiko izy ireo fa mila karatra sim avy amin'ny orinasa voalohany, dia ny EE, fa eto Buenos Aires dia tsy tsy mahazo sim avy amin'io orinasa io. Misy mahalala ny fomba ahafahako mameno ny rafitra fiasa? tsy mangataka amiko tenimiafina na lakile iCloud izy io, ka farafaharatsiny milamina aho fa tsy nanakana ahy izy ireo. Niresaka tamin'ny mponin'i Iphone aho ary nilaza tamiko izy ireo fa tsy ao anaty tarika miiba izy io. Mila mampavitrika azy fotsiny aho .... MBA AZAFADY IZAY MANASA ANAO NY FOMBA FANAO IZANY. Aleoko fa farafaharatsiny mba manompo ahy hihaino mozika ary hampiasa azy io ho takelaka ... tsara, aleon'ny zanako vavy. Miarahaba sy misaotra.
tatiana garcia dia hoy izy:
Manana iPhone 5s aho ary nosakanan'i icloud ary tsy fantatro ny teny miafina nomeny ahy ary tsy fantatry ny olona ny teny miafiko na zavatra tsy fantatro raha manana fandaharana hahafahana mampiasa ilay izy ireo vaovao ny sela
Mamaly an'i Tatiana garcia
Mariela Araya Castillo dia hoy izy:
Raha sakanan'ny iCloud izany dia avereno azafady, azo angalarina.
Valiny tamin'i Mariela Araya Castillo
amadeo dia hoy izy:
Nividy Iphone 6 tamin'ny eBay aho, saingy rehefa nanandrana nampiasa azy ireo dia nilaza tamiko izy ireo tao amin'ny Macservice Chile fa nosakanan'ny T-mobile izy io, tsy misy orinasa toy izany eto, afaka mamoha azy amin'ny alàlan'ny famakiana azy io.
Ankasitrahako raha afaka mandefa vaovao amiko amin'ny mailakao ianao.
Valiny tamin'i Amadeo
Iris dia hoy izy:
Salama, manana iPhone 7 plus aho, nividy azy tany Mexico aho, izao ananako any Peroa, hay hita fa nisy IDD nifandray, ka tsy tadidiko, tsy afaka namoha azy aho fa Izaho no tompony, nividy azy tao amin'ny fivarotana paoma aho, fanampiana vitsivitsy ary avy any ñapa ny mailaka dia tsy te hanokatra ahy isaky ny faritra, satria tsy eto Mexico aho, foza tokana, izany rehetra izany ho an'ny iphone,
Mamaly an'i Iris
ERIC dia hoy izy:
Salama, manana iPhone 5s aho, efa nividy azy hatramin'ny voalohany aho rehefa nankany amin'ilay toerana amarotany finday ary rehefa hitako ny telefaona finday dia milamina tsara ary nojereko tamin'io fotoana io ny fakantsary ny zava-drehetra sy ny sela telefaona dia tsara ny zava-drehetra ary fampiasana antsasaky ny finday izany fa rehefa avy nividy azy aho dia tonga tao an-tranoko ary nosakanana tamin'i iphone ny iphone ary tsy afaka namono azy aho satria misy mailaka avy amin'ny tompony ary ahoana no fomba hamafana azy, hoy ny maro amiko fa tsy azo esorina izany ary mijanona ho ipod fotsiny izy, misy olona afaka miteny amiko fa miteny aho fa raha tsy maintsy misy ny vahaolana fanakanana icloud ary efa nanary zavatra betsaka aho tamin'ity herinandro ity hamaha azy dia nanao andrana maro hamaha azy aho saingy Tsy afaka manao na inona na inona aho mila ny fanampianao
Avy any MEXICO, MEXICO CITY aho raha misy manampy ahy dia tiako io.
Valiny amin'i ERIC
Jesus Vazquez dia hoy izy:
Salama, nahitako iPhone (tamin'ny alàlan'ny polisy) izay nangalarina tamiko taloha. Na eo aza ny fananako ny faktiora amin'ny anarako, miaraka amin'ny imei an'ny telefaona, ny fitarainana izay ahitan'ny imeiany ny telefaona. Ilay olona tena mahay izay ezahako hamaha ilay terminal dia mahafantatra ary mampahafantatra ahy fa fananako tokoa ilay terminal. NY MAILY MIARAKA AMIN'IZY IREO VALINY NO LAZAINO FA TSY VOAZAVA IZAO MBOLA HAMORAZANA FA "ole, ole ary ole".
Ireto tovolahy avy any APPLE sy ICLOUD ireto dia nanangana azy io ka raha misy ny antony dia hianjera ny terminal anao ary mila manantona azy ireo ianao amin'ny alàlan'ny fomba efa napetraka dia tsapanao fa tsy manana telefaona intsony ianao fa milanja taratasy, ary raha tianao miverena manana iPhone dia mila mamaky ilay boaty indray ianao.
Valiny tamin'i Jesus Vázquez
Marcela dia hoy izy:
Nividy iPhone 6 aho ary mandeha tsara ny zava-drehetra amin'ny karatra SIM sy ny kaontiko ao amin'ny iTunes saingy misy kaonty icloud mifandray aminy izay tsy azoko idirana satria mangataka teny miafina amiko izy nefa tsy misy akony amin'ny fiasan'ny telefaona, raha tsy rehefa misy famantarana kely mipoitra milaza fa napetrako ny teny miafiko mba hamaha fa ny fametrahana "tsy izao" dia efa eo. Misy ve ny fahafahan'izy ireo manara-maso ahy na ny sarin'ny telefaona dia azo aseho amin'ny icloud amin'ilay kaonty mifandraika?
Mamaly an'i marcela
Vao nahazo iPhone 8 nangalatra tany Mexico aho. Lazaiko aminao fa tsy azo atao ny miala amin'ny kaonty iCloud, mampandeha ny maody very fotsiny ny iray ary raha vao ampidirina SIM ny telefaona na ampifandraisina amin'ny tamba-jotra dia ho voaray ny toerana misy azy. Raha ny ahy dia nalain'izy ireo ny SIM-ko ary nampidiriny amina telefaona hafa hananana fifandraisana amin'ireo olona voatahiry ao, tamin'izay dia nanandrana nanodinkodina ahy tamina pejy sandoka izy ireo izay mody hoe avy any Apple izy ireo izay mangataka karapanondro sy teny miafina. 7 andro lasa izay, mazava ho azy fa efa azoko tamin'ny SIM hafa ny tarehiko ary hatramin'izao dia mbola mandray hafatra avy amin'ny pejy diso aho manandrana mahazo ny karapanondroko sy ny teny miafiko. Ankoatr'izay dia efa nahazo mailaka marobe avy amin'ny Apple mandefa ny toerana misy ny fitaovana, izay amin'ny adiresy tsy miankina amin'ny faritra tsy azo antoka ... Farafaharatsiny faly aho mahafantatra fa tsy ho afaka hampiasa ny findaiko halatra mihitsy izy ireo. Ary tompokolahy, raha sendra anao io indray andro, tandremo ny toerana nametrahanao ny kaonty icloud…. satria ny fomba tokana ahafahan'izy ireo manakana azy io dia ny fahafahany mamita azy ireo hametraka ny data-ny amin'ny pejy diso.
Telefaona halatra be dia hoy izy:
Nangalatra finday aho, ahoana no hamoha azy mba hahafahako mivarotra azy lafo kokoa? : v
Valin'ny telefaona Grand halatra
Jose Armando Chirinos Anaya dia hoy izy:
Salama namana, ahoana ny fahitanao azy, nividy iPhone 6 tamin'ny tompony aho, izay manana kaonty icloud an'ny iPhone an'ny zanany vavy, tompona, izay ananako ny mailaka sy ny teny miafiko, fa rehefa miditra aho dia azoko ilay kaonty. dia nosakanana noho ny antony ara-piarovana tsy ananako fidirana satria mangataka kaody izay alefany ny mailany na ny isany ary misy olana ara-pianakaviana ny ray aman-dreny ary tsy azon'ny tompony anontaniana ny kaonty paoma id ny fanontaniako. dia; Misy fomba hidirana ao amin'ny iCloud ve raha tsy fantatro ny fanontaniana momba ny fiarovana na ny mailaka anao sa misy fomba iray mankany amin'ny tompon'ny orinasa finday ary hamoaka "esory" ny iCloud-nao? Mety hisy vidiny ve? IN PERU
Mamaly an'i jose armando chirinos anaya
gringo dia hoy izy:
Ianao dia asshole indiana
Valiny tamin'i Gringo
Germán avy any Kolombia. dia hoy izy:
Salama. Ry tompokolahy, izay liana amin'ny filaminana dia te hahalala raha sendra misy fatiantoka dia azo atao ny mamoha sy mandray ny angon-drakitra ataontsika. Mpampiasa Android aho, nanana Galaxy Note 5 miorim-paka ary hita fa rehefa naverina tamin'ny laoniny ny finday dia notahiriziny ny angona, izay tena matotra. Ankehitriny miaraka amin'ny Galaxy J8 tsy misy fanovana rehefa mamerina azy io dia manontany ahy ny kaonty google izy. Te hahafantatra aho raha azo antoka na tsia ny hidin-trano iCloud satria mikasa ny hividy 6S aho. Heveriko fa voatazona ny filaminana raha mbola mitazona ny rindrambaiko havaozina ny telefaona sa miankina bebe kokoa amin'ny fitaovana fiarovana fanampiny an'ny fitaovana tsirairay satria vao haingana kokoa?
Valiny tamin'i Germán avy any Kolombia.
louis padilla dia hoy izy:
Na dia tsy misy aza ny fiarovana 100%, ny hidin-trano iCloud dia manakana olona tsy hamerina amin'ny laoniny ny fitaovanao tsy misy alalana aminao ary mamerina ny angon-drakitrao, tsy azon'izy ireo natao ny manamboatra azy io miaraka aminy, satria mila miditra ny anaranao sy ny tenimiafinao aloha ianao.
sebasty RR dia hoy izy:
Salama daholo, avelao aho hizara… nividy ipad 2 aho ary manana ny kaonty icloud ianao, mazava ho azy fa tsy maintsy angalarina ny ipad fa efa navoaka ny kaonty icloud fa tsy afaka mamafa izany amin'ny ipad aho, ny fanontaniako dia raha azonao esorina izany kaonty amin'ny alàlan'ny hack fa amin'ny alàlan'ny hack sasany toy ny jailbreak nefa tsy mila hamerina azy io satria fantatro fa ho voasakana izany noho ianareo rehetra.
Mamaly an'i sebasty RR
Pamela dia hoy izy:
Namidin'izy ireo tamiko iPhone nosakanan'ny icloud ary tsy hitako izay hatao amin'ny telefaona finday. Misy vahaolana ve izany?
Valiny tamin'i Pamela
Marco Ventura dia hoy izy:
hace 6 volana
Salama, manao ahoana ianao? Mieritreritra ny hividy iPhone 12 pro miaraka amin'ny hidin'ny iCloud aho, ny mpivarotra no tompon'ny iPhone fa noho ny antony tsy azonao lazaina amiko dia manana ny hidin'ny iCloud izy, manoro hevitra ve ianao handany kely hamahana azy? Mbola afaka manokatra sy mijanona amin'ny 100 ve ianao? Mba ampio aho azafady:)
Valiny an'i Marco Ventura
Tsy hividy an'io finday io aho. Raha sakanan'ny iCloud izy io dia azo angalarina mihitsy aza ... Tsy manoro azy aho.
Tonga ihany koa ireo beta voalohany an'ny OS X 10.11.6 sy tvOS 9.2.2
Apple dia namoaka ny beta voalohany amin'ny iOS 9.3.3